Gobolka - Nidaamka Baradhada
Beeraha baradhada ee gobolka Novosibirsk
Baradhadu waxaa lagu hayaa tixgelin sare
Baradhada sii kordheysa ee gobolka Novosibirsk
Kostroma Potato LLC waa mid ka mid ah beero baradhada ugu weyn gobolka Kostroma. Sannadkan shirkaddu waxay u dabaaldegeysaa ...
Vasily Puchkov, wakiilka Central Federal District, LLC "GRIMME-RUS" Wax soo saarka baradhada ee gobolka Kostroma waa mid ka mid ah qeybaha hoose ee dhaqanka ee beeraha. Baradho koraya ...
Gobolka Nizhny Novgorod ee sanadka 2019, waxaa laga furay 7 iskaashato cusub oo beeraha ah
“Iskaashi kastaa wuxuu mideeyaa dhowr beerood, taas oo noo oggolaaneysa inaan xallino dhibaatooyinka ay ku adkaan karto beeraleyda inay kaligood la qabsadaan. Tusaale ahaan, iibsashada qaaliga ah ...
237 milyan oo rubles ayaa loo qorsheeyay in lagu kharash gareeyo horumarinta abuurista miraha diirran ee gobolka Nizhny Novgorod sanadka 2020
Gaar ahaan, 120 milyan oo rubles ayaa laga qoondeyn doonaa misaaniyadda federaalka iyo qiyaastii 117 milyan rubles miisaaniyadda gobolka. Xarumaha ...
Beeraha baradhada ee gobolka Tula
Beeraha baradhada ee gobolka Tula Maanta, 59% baradhada dhulka Tula waxaa laga soo saaray waaxda warshadaha: ururada beeraha, beero beero ...
Baradhada baradhada ee gobolka Tula
Territori: 25 679 sq. kiiloomitir Tirada dadka: 1 478 818 qof, oo 75,45% ka mid ahi ay deggan yihiin magaalada. Goob juquraafi ahaan: gobolku wuxuu ku yaal ...
Beeraleyda baradhada ee gobolka Tyumen
Qaar badan, gobolka Tyumen ayaa ah, ugu horrayn, meel ay tahay kaydadka saliida iyo gaaska ee waddanka ugu weyn. Laakiin ...
Baradhada baradhada ee gobolka Tyumen
Dhul: 1 sq. km. Tirada dadka: 464 qof, oo 173% ay yihiin deganeyaasha magaalada. Booska joqoraafi ahaaneed: Tyumenskaya ...
Beeraha baradhada ee gobolka Samara
Alexander Nacharov, wakiilka gobolka ee Volga, GRIMME-RUS LLC In kabadan 500 shirkado beereed oo noocyo kala duwan ah ayaa si guul leh uga howl gala gobolka Samara ...
Baradhada baradhada ee gobolka Samara
Dhul: 53 sq. km. Tirada dadka: 565 oo dad ah, kuwaas oo 3% ay yihiin deganeyaasha magaalooyinka. Booska joqoraafi ahaan: waxaa lagu daray ...